XOG:- Madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra’iisul wasaare Cumar oo dacwad laga gudbiyay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra’iisul wasaare Cumar oo dacwad laga gudbiyay (AKHRISO)
Warar hoose aynu heleyno ayaa inoo sheegaya in qaar ka mid musharixiinta u tartameeysa xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya ay dacwad ka gudbiyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Dacwadaasi ayaa sida la sheegay loo gudbiyay Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating, kaas oo dhawaan musharixiintaasi kula kulmay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Musharixiintaasi ayaa ku dacwoonaya in doorashadda dalka aysan ku dhicin xilligii rasmiga ahayd ee loogu talo-galay, islamarkaana ay awoodii dalka isku koobeen koox yar oo la baxday magaca Madasha Qaran.
Sidoo kale, waxay musharixiintaasi ka dacwoodeen in madaxweyne Xasan Sheekh uu bilaabay inuu caburiyo siyaasiyiinta madaxa banaan iyo xisbiyadda ka jira dalka, kaas oo u diiday shirarkii iyo ololeyaashii doorasho ay ku qabsan lahaayeen magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, waxaa musharixiinta la kulmay Michael Keating ka mid ahaa ra’iisul wasaarihii hore ee dowladdii KMG ahayd Maxamed C/laahi Farmaajo, Cali Xaaji Xersi, C/laahi Ciil-mooge iyo xubno kale oo badan.
Ugu dambeyntii, Michael Keating ayaa musharixiintaasi u sheegay in isaga xitaa uu la qabo wel-welka xaaladda doorashada ee dalka Soomaaliya, balse ay ku dadaali doonaan sidii lagu xaqiijin lahaa in xal rasmi ah loo helo arrimaha haatan ka taagan dalka.